Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » WTM London Ma Furan tahay: Xorayn mise Cabsi?
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
Suuqa Socdaalka Adduunka wuu furan yahay; Dunida Dalxiiska ayaa ku kulmaya London - waana kulan farxad leh ilaa hadda.
Marka loo eego qiyaasaha ay soo saartay Suuqa Socdaalka Adduunka (WTM), soo-bandhigeyaasha in ka badan 100 waddan ayaa la xaqiijiyay, iyada oo iibsadayaashu ay ka yimaadeen 141 waddan iyo gobollada si ay u muujiyaan bandhigga ganacsiga ee ka socda London (Noofambar 1-3).
Laba toddobaad ka hor, Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa ka codsatay Reed, qabanqaabiyaha WTM London, inay amarto waji-xidhka.
Suuqa Socdaalka Adduunka wuxuu ballan qaaday badbaadada dhammaan ka qaybgalayaasha ayaa ahaa mudnaanta ugu sarreysa.
Laba toddobaad ka hor, WTN ayaa sheegay eTurboNews oo lagu dhajiyay shabakadeeda: "Waxaan si adag kuugula talineynaa inaad xirato maaskaro wajiga markaad gudaha gudaha kula jirto shaqsiyaad aadan sida caadiga ah ku dhex milmin."
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay ku boorinaysay WTM toddobaadyo ka hor inay tallaabo dheeraad ah u qaadaan oo ay waajib ku tahay xidhashada maaskaro qof walba.
Maanta, albaabada Xarunta Bandhigga Excel ee London waxay furmeen 10:00 subaxnimo ee Noofambar 1 Dunida Dalxiiska inay isu yimaadaan, si ay u gacan qaadaan mar kale, oo ay isku duubaan.
Maaskaro ayaa hoos ugu dhacay baahi aad u yar, iyo ku dhawaad ​​qof kasta oo ka shaqeeya ama ka soo qaybgalay goobta, oo ay ku jiraan shaqaalaha makhaayadda, ma isku dayin inay xidhaan maaskaro.
1-da Noofambar sidoo kale waxay ahayd maalintii ay Dowladda Ingiriisku dejisay shuruudaha, si la yaab leh maalin ay warbixinno kale sheegayaan in sariiraha daryeelka degdegga ah ay mar kale ku dhowdahay inaan la heli karin oo tirada COVID-19 ay kor u kacday.
Kiisaska, kiisaska firfircoon, isbitaal dhigista, iyo heerka dhimashada ayaa kor u kacaya gudaha UK, laakiin goobaha dhacdooyinka sida Excel, baararka, iyo naadiyada habeenkii waa furan yihiin dadkuna waxay dareemayaan xornimo.
Dareenkan xornimo-doonka ah ayaa maanta ka dhacay Suuqa Socdaalka Adduunka ee London. Safarka iyo dalxiisku waa qoys weyn, waxaadna aragtay ilmo, taabashada bini'aadamkuna waxay soo noqotay markii saaxiibadii hore ay mar kale kulmeen ka dib 2 sano oo xayiraad COVID ah.
WTM waxay hubisay diiwaannada tallaalka qof kasta oo soo galaya xarunta bandhigga, laakiin tani ma ku filan tahay? Inta badan cusbitaalada cusub waxay u muuqdaan inay yihiin dad si buuxda u talaalan.
Suuqa Safarka Adduunka waa ka aamusan yahay, waxaa jira meelo badan oo banaan iyo goobo fadhi, inkastoo ay buuxsameen marka safka loogu jiro qaxwaha, waxay la macno tahay kaqeybgalayaashu waxay awoodeen inay ku fidaan hoolalka bandhigyada.
Shaqaalaha - maaskaro ma jiraan
Mudane. Edmund Bartlett oo isu diyaarinaya waraysi uu la yeesho CNN Richard Quest
Gacmaha nadiifiyaha kafeega oo aan shaqaynayn
Shirka Jaraa'id ee Thailand
Naqshadaynta joogsigu way yaraayeen, laakiin kala dheeraynta tarabuunka wax badan iskamay beddelin. Waxaa jira bandhig-bixiyeyaal iyo booqdeyaal aad u yar oo ka qayb galaya. Sacuudi Carabiya dabcan waxay muujisay awood ay ku soo bandhigtay maqaaxi cajiib ah oo ka taagan Pavillion. Sacuudi Carabiya waa lamaanaha rasmiga ah ee dhacdada WTM.
Haddii WTN ay ku soo bandhigto laba toddobaad gudahood, ma jiraan kiisas cusub oo ka soo baxay maaskaro la'aan, ma jirto siyaasad fogeynta bulshada, waxay la macno noqon doontaa cutub cusub oo dhacdooyinka mustaqbalka ee Britain iyo kulanka iyo warshadaha dhiirigelinta ee meelo kale ayaa la aasaasay.
eTurboNews ayaa soo bandhigi doona aIMEX Ameerika, Bandhiga Ganacsiga Kulanka iyo Dhiirigelinta ee Las Vegas Noofambar 8-11.
eTurboNews sidoo kale waa lamaanaha rasmiga ah ee warbaahinta ee Suuqa Socdaalka Adduunka ee London.